Sunday 5th May 2019 10:08:56 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Aniga oo ka shidaal-qaadanaaya xeerarka Caalamiga ah ee Xaquuqda Aadamaha ee Qaramada Midoobay
ee dhaqan galay sanadkii 10.12. 1948 gaar ahaan qodobada1,2,3,5,7,9,10,11,13 faqradaha 1 & 2; sidoo kale qodobada 18,19, iyo 20.
Inigoo isna tixraacaya Axdiga Xuquuqda Aadamaha ee Midowga Yurub ee dhaqan galay 1.6.2010, gaar ahaa qodobadiisa 3,5, 6-faqradaha1,2,3 xarfahaA,b,c, d& e, qodobka 7-aad faqradaha 1 & 2; qodobka 9-aad faqradaha 1&2; qodobka 10-aad faqradaha 1&2; qodobka 11-aad faqradaha 1& 2.
Sida ku cadDastuurka Jamjuuriyadda Somaliland,qodobkiisa 27-aad farqadiisa 1-aadee tilmaamaya Xuquuqda iyo Waajibaadka Muwaadinka ee lama taab taanka ah. Sida uu qeexaayo Xeer Lr 14/2001 qodobkiisa 20-aad farqadiisa 1-aad waxaa lagu tuntay isla markaana la ixtiraami waayeyxasaanadii masuulnimo iyo tiixisbinimo ee masuulkaasi lahaa. dhamaan tacadiyadaa loo geystay muwaadinkaas ee jidh-dilka leh ee katiinada leh ee fayo-dhawr xumada leh waxay baal marsan yihiin Dastuurka Qaranka Somaliland.
Dhammaan qodobada badan ee kor ku xusan eeay kow ka yahiin Xeerarka Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadamaha ee Qaramada Midoobay, Axdiga Xuquuqda Aadamahaee Dadyowga Midowga Afrika, Axdiga Xuquuqda Aadamaha Midowga Yurub, iyo qodobka 27-aad farqadiisa 1-aad ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland waxay gebi ahaantood sid cad u qeexayaan xasaanada iyo xuquuda Bani-aadamka.
Waxaa dhamaan xeerarkan kor kuxusani ka wadadigayaan in aan sinaba qofka Bani aaadamka ah loogula dhaqmi karin sifo ka baxsan xeerarka caalamiga, sharciga islaamka iyoshuruucda Dastuurka qaranka.haddii aan maxkamad sharci ah horteeda loogu cadeyn fal-dambiyeed uu ciqaab iyo xadhig ku mutaysan karo. Waxa qawaaniinta caalamka ka reeban in lagu xad-gudbo xuquuqda shakhsigaloona isticmaaloawood dowladeed iyo mid ciidan,isaga oo aan lagu qaban isaga oodenbi faraha kula jira.
Waxaa xukuumadda cod dheer loogu sheegayaain Gudoomiye Moxamed dhame xoriyadiisa si deg deg ah ugu soo celiso.Sida xukuumadda talada haysaa jejceshahayXisbiyada mucaaridka laguma sandulayn karo. Waxaa magaca muwaadinkaloo gudbiyey dhamaan haydaha udooda xuquuqul insaanka ee wadanka ingiriiska ka hawlgala
ku waas oo Xukuumada su'aalo ka waydiin doona Xadhigiisawaxaana ka mid ah hayadahaas kuwan hoose: